Sary masina vaovao ho an'ny Google Play miaraka amina lantom-peony | Famoronana an-tserasera
Google dia manana Nanavao ny fianakavian'ny sary masina ao amin'ny fivarotanao ho an'ny atiny multimedia izay nantsoiny hoe Google Play ary fidirana maro ahazoana fampiharana, lalao video, boky, sarimihetsika ary mozika.
Ao amin'ity famolavolana vaovao ity ho an'ny sarin'ny fampiharana rehetra izay manana ny teny «Play», dia napetrany mifantoha paleta loko vaovao izay, fa tsy mijery malefaka tahaka ny tamin'ny endriny teo aloha, dia asongadino amin'ny feo mazava kokoa ary manome loko lehibe ho an'ny iray manontolo izy amin'ny farany. Fanavaozana izay hanaraka ny manaraka Material Design.
Mahazo ihany koa ireo fampiharana toa ny Google Play Music, Play Books na Play Movie fiovana eo amin'ny toerana misy ny singa ho an'ny ray aman-dreny ao anatin'ilay inona ny telozoro izay mamaritra ny fivarotana Android iray manontolo ho an'ny karazana atiny multimedia rehetra.
Amin'ity fanavaozana ity dia asehon'i Google ny maha-izy azy iray amin'ireo orinasa tsy milamina na mahazo aina amin'ny endrika amam-pireneny, fa matetika dia havaozina. Ity koa dia manamafy ny marika misy azy ary amin'ity indray mitoraka ity, amin'ny alàlan'ireo fampiasana loko miloko kokoa ireo dia mampifandray izany amin'ny OS ho an'ireo fitaovana finday izay mihamatanjaka hatrany ary mandeha tsara kokoa.
Araka ny efa noresahintsika imbetsaka ampahany lehibe ny logo amin'ny famantarana marika misy loko, endrika ary dikany. Google dia iray amin'ireo tompo amin'ity fiteny hita maso ity izay hainy tanteraka.
Ny zavatra mahaliana amin'ity fanavaozana ity amin'ny sary masina dia, ny be mpampiasa indrindra, ilay ao amin'ny magazay ihany, ny ny hany fanovana miharihary dia amin'ny accentuation miloko toy ny sasany amin'izy ireo ihany. Ireo kisary vaovao ireo dia ho tonga amin'ny herinandro ho avy ao amin'ny fanavaozana vaovao izay horaisin'ireo rindrambaiko amin'ny telefaona Android sy takelaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny fanavaozana ny kisary Google Play vaovao
Louis Henry Solis dia hoy izy:
Marina ve fa hapetrak'izy ireo izany? koa maninona no tsy ratsy ny tena marina ka manova azy toy izao: 3
Valiny tamin'i Luis Enrique Solis
Eny, mandritra ny herinandro vitsivitsy